Home News Warar kala duwan oo kasoo baxaya duqayn ka dhacday Gobolka Bari
Warar kala duwan oo kasoo baxaya duqayn ka dhacday Gobolka Bari
Wararka ka imanaya Buuraleyda Calmadow ee Gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaas ay duqeyn dhinaca cirka ah ka dhacday xalay.
Duqeynta ayaa waxaa ay xalay fiidkii ka dhacday Degaan lagu magacaabo Madarshaan oo u dhaxeeya Magaalada Boosaaso iyo Galgala.
Wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas lagu beegsaday xubno ka tirsan AL-shabaab halkaas oo la sheegayo in ugu yaraan 10 qof ku dhinteen.
Qaar ka mid ah Warbaahinta degaannada Puntland ayaa sheegaya in weerarka xalay uu yimid kaddib markii shalay uu weerar Miino ahaa ka dhacay duleedka Magaalada Boosaaso.
Weerarkaas ayaa lala beegsaday Ciidamada Maamulka Puntland halkaas oo ay ku dhaawacmeen saddex Askari oo la socday Gaari kuwa Ciidanka ah oo isaga kala gooshayay Buuraleyda Galgala iyo Magaalada Boosaaso.
Mareykanka oo inta badan sheegta weerarrada dhinaca cirka ah ee ka dhaca Soomaaliya wali kama hadlin duqeynta laga soo wariyay Gobolka Bari.